Warshad ornamental koraya | December 2019
Calathea - shuruudaha daryeelka aasaasiga ah
Dhirta guryaha waxaa ka mid ah Calathea. Waxay ka tirsan tahay reerka guurka waxayna leedahay qiyaas ahaan 130 nooc. Dabeecadda, dhirta waxaa laga helaa Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, oo magaceeda macneheedu waa "dambi" - caleenta Calathea marmar ayay qaadataa dambiisha. Maanta, calathea waxaa lagu koray ujeedooyin qurxoon.
Catalog of noocyo caan ah ee irises
Irises waxay u egyihiin qurux badan, waxay u adeegaan sidii quruxda cajiibka ah ee ubaxyada iyo beeraha hore. Waxa kaliya ee kicin kara waa ubax gaaban. Xilliga cimilada kulul, irid-yaraha ayaa xajistaa macmacaankiisa iyo soo jiidashada ilaa laba maalmood, cimilada qabow - ilaa afar. Hase yeeshee, tanina waxay ka baxaysaa xaqiiqda ah in irisku uu ku dhowyahay aan kala go 'lahayn illaa bartamihii Maajo ilaa horraantii Agoosto.
Sida loo daryeelo shaaha oo kor u kacay
Shaaha wuxuu kacay mid ka mid ah Beelaha Shiinaha ee Shiinaha. Mararka qaar dhirta waxaa loo yeeri karaa "Rose Rose". Qaxwaha waxaa ku jira fasalka dicotyledons, amarka Rosaceae, qoyska ee casaan, caanaha duurjoogta. Beeridda shaaha waxay ka kacday goobta qaxwaha, ama baradhada udubku waxay muddo dheer noqotaa jecel dadka ku hawlan floriculture.
Waa maxay sababta ay ubax u yihiin caafimaadka dadka?
Rose waxaa loo arkaa mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan. Dadku waxay ku ammaaneen qarniyo badan oo ku yaal sawirro, buugaag iyo heeso. Intaa waxaa dheer in quruxdiisa, Rose wuxuu leeyahay guryaha faa'iido badan. Waxyaabaha kiimikada ee korantada ah ee korantada Qaybta kiimikaad ee shubanku waa mid gaar ah ee tirada nafaqooyinka: fructose, glucose, sucrose; flavanoids; asiidhyada kiimikada; dabeecada; tannins; pectin; Reinka; saliidaha muhiimka ah.
Siraha ah ee beerto iyo daryeelida iris
Irizes - ubax cute leh leh "magac delicious". Warshad Tani - wakiil ka ah caleemaha Kasatikov, oo loogu talagalay magaca caanka ah "kasatiki". Inta badan xaaladaha dabiiciga ah, dhirta waxaa laga helaa Yurub, Aasiya, Waqooyiga Afrika, iyo sidoo kale Waqooyiga Ameerika. Meelaha ay ku nool yihiin waxay ka koraan 250 nooc.
Noocyada barafka: sharaxaad, faa'iidooyin, faa'iido iyo sawirro
Barafku waa mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan oo ku farxi karta isha ubaxa, xataa cimilada qabow. Hoos waxaan ku siineynaa noocyada ugu caansan ee barafka oo ay weheliso sawirro kuwaas oo aad si fudud u dooran karto warshad beerta ubaxaaga ah. Snowberry caddaan (symphoricar-pos albus bie) Barafka cad waa noocyada ugu caansan ee laga heli karo sariiraha ubaxa ee aagagga cimilada ee kala duwan.
Sidee si habboon u daryeelaan amaranth, talooyin waxtar leh
Amaranth ee dhererkiisu dheer yahay waxaa loo arkaa dad badan sida haramaha, inkastoo ubaxkan la beeray oo xitaa loo isticmaalo karinta. Aan aragno waxa gaarka ah ee ku saabsan dhirta this iyo sida loo koro amaranth ee sariirta ubax gaar ah. Amaranth: sharaxaad ka mid ah dhirta In muuqaalka, amaranth waa warshad aad u dheer dheer oo leh stem a doorashadii qaro weyn, kaas oo lagu daboolay caleemo badan oo lagu tuntay ubaxleeyaal ah (in noocyo qaar ka mid ah amaranth ee inflorescence laga yaabaa in la leexiyo).
Azalea waa dhir diiran oo dabiici ah oo ku faraxsan ubax, haddii si habboon loo raaco, dooro meel wanaagsan oo beerta ah, hubi inaad waraabiso habboon iyo quudinta. Azalea waxay dareemeysaa raaxo leh sheyga isku dhafan ee kala duwan (iyadoo ku xiran nooca warshadda), laakiin ma aha inay hoos u dhigto hooska adag.
Daryeelka Kobe midig: Talooyin loogu talagalay bilowga
Kobeya waa marti ka timaada qorraxxumo Mexico ah oo ku koray beeralayda ubaxa ee koritaanka degdegga ah iyo muuqaalka qurxinta. Tani waxay caleemaha canabka ah la socotaa jilicsanaanteeda xannibaadaha ah waxay taageertaa taageerada waxayna kor ugu kacdaa ilaa lix mitir. Ubaxeeda ee qaabka bluebells ku faraxsan yahay badan oo ah midabyo: caddaan, casaan, guduud, lilac iyo xitaa burgundy. Beereedka Kobe abuurka loogu talagalay geedo Kobei miraha beeray bishii Febraayo ama maalmaha koowaad ee Maarso.
Waa maxay nooca edelweiss ku habboon beeralayda ubaxa
Edelweiss waa warshad ka tirsan qoyska Astrov. Gurigiisa waxaa ku yaal wadamo ka mid ah bartamaha iyo koofurta Yurub, sidoo kale wuxuu ku kordhay Aasiya, oo ku yaal dhulalka buuraha. Ubaxku wuxuu ku koraa buuraha sare, halkaasoo heerkulku hoos u dhaco, hawada khafiif ah iyo xaalado adag. Heerka sare ee korriinka koraya wuxuu kudhowaad yahay 2000 mitir ka sarreysa heerka badda.
Qeexida nooca caanaha ugu caansan ee kabaha cagaha
Kareeraha Lady waa mid ka mid ah noocyada orchids. Waxaa jira halyeey ah oo ka hadlaya Venus iyo Adonis. Markuu Venus ku dhaadhacay Adonis Earth on socodka kaynta xagaaga, wuxuu bilaabmay duufaan xoog leh. Duufaan ka timid duufaanka, waxay ku dhuunteen geedaha hoostiisa, Venus waxay soo qabteen kabaha qooyska ah waxayna dhigeen dhulka.
Talooyinka ugu wanaagsan ee loogu talagalay daryeelka koollada beerta
"Ubaxa-bouquet", "ubaxa caarada" ama kaliya roonaanta. Gacaliyahooda jecel ee ubaxyada quruxda leh ee foomka asalka ah iyo midabo kala duwan. Xitaa caraf udgoon leh iyo nolol gaaban ayaa la cafiyay - oo ku yaal dhulkeena, Cleoma waa koray sanadkiiba. Laakiin quruxda iyo fududaynta daryeelka ayaa ka culus dhibaatooyinkan.
Amaranth (fudud "schiritsa") waa warshad cusub oo dhaqankayaga, inkasta oo la og yahay hannaankiisa bogsoodka ah tan iyo wakhtiyadii King of Peas. Amaranth waxay soo jiidatay dareenka nafleyda iyo nafaqada sida badeeco "ideal". Dhirta mucjisada ah waxaa loo adeegsaday mid ka mid ah "kabista" ee loogu talagalay allabaryo. Hindida Hindiya waxay u arkeen "wax aan waxba tareyn" oo aad u baqdin geliyay Isbaanishiyaanka Isbaanishka iyaga oo go'aansaday in ay burburiyaan geedka, iyagoo rajeynaya in ay Indiya naftooda ka badbaadiyaan caadada bixinta.
Noocyo kala duwan oo dhagax ah, waa maxay kaabajka lafaha
Sedum, Sedum ama, sida ay caan u yihiin, kaabajka hare waxaa koraa oo dhan Europe, Africa iyo America. Dabeecadda, waxaa jira in ka badan 600 nooc oo sedum ah. Waa maxay stonecrop, ugu caansan ee noocyada iyo noocyada, waxaan ku sharaxnaa maqaalkan. Sedum (stonecrop) cad Cagaarka dhirta oo qarxi ah 5-7 cm ee dhererka.
Kobcinta cagaarka abuurka
Ubaxa ubaxa, kaas oo loo yaqaan dad badan oo hoos yimaada magaca "Pansies", koraa ugu quruxda badan haddii ay ka koraan abuur. Waa suurtogal in lagu qurxiyo balakoonkaaga ama goobta si aad u yar macnaheedu, ka dib dhammaan miraha jaban aad u jaban, marka la barbardhigo geedo koray. Waa suurtogal in lagu beero abuurka labadaba taangiyada geedaha khaas ah iyo dhulka furan.
Sida loo koro heather, dhirta dhirta beerta
Sida laga soo xigtay halyeeygii hore ee reer galbeedka, kaliya heather, codsiga Ilaah, ayaa go'aansaday in uu ku koro goobaha qashinka ah ee buuraha dabaysha. Go'aankaas oo kale, waxaa lagu abaalmariyey adkeysi ballaaran, kalsooni dabiiciga ah iyo wax qabad la'aan, iyo dib-u-dhiska oo leh caraf udgoon iyo tayada dhirta malab-qaadista.
Forsythia: sharaxaad, noocyo, noocyo
Faa'iidada ugu weyn ee forsythia waa ubaxyada rabshadaha ee ubaxyada huruud ah dhalaalaya guga hore, marka geedaha intiisa kale weli wicin. Tani waxay ka dhigeysaa warshad qurxoon oo caan ka ah Europe iyo America muddo ka badan 200 sano. Kobcinaya geedkan xayawaanka ee Shiinaha ama Kuuriya waa dhowr kun oo sano jir: marka lagu daro tayada qurxinta, sifooyinka daawooyinka ee forsythia ayaa lagu qiimeeyaa halkan (shanta qadiimiga ah ee Shiineeska ah, waxaa lagu daraa shanta konton ee dhirta waaweyn ee daawooyinka).
Sida loo doorto ubaxyada masduulka ah ee guriga, noocyada caanka ah ee dhirta qalaad
Afrika waxay hoy u tahay qulqulayaal badan, qaar ka mid ah markii hore laga helay bartamaha Ameerika. Noocyada Dracaena waxay leeyihiin in ka badan 60 shey, qaar ka mid ah ayaa magacyadooda magacyadooda la siiyay sababtoo ah foomamka aan caadiga ahayn. Taageerayaasha floriculture indoor ah dracaena leh foomamka kala duwan oo qalaad.
Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan koritaanka qolalka mahonia
Haddii aad dooneyso in aad qurxiso beertaada ku xoortay geedaha ubaxyada iyo ubaxyada oo keliya oo ka fikir in dhirta ay ku beeri karaan, waxaanu kugula talineynaa in aad taxaddar u yeelatid caleenta cagaaran (Mahonia aquifolia). I rumaysta, ma waxaad heli doontaa oo kaliya qurux qurux badan, laakiin sidoo kale waxay awoodaan inay ku ducaystaan ​​beeraha delicious iyo caafimaad leh ee dhirta this, kaas oo loo isticmaali karaa in lagu sameeyo khamri, macaanka iyo decoction daawo.
Noocyada daryeelka Dicentra, sida loo koro "wadnaha oohinta" beerta
Dicentra waxaa iska leh cirridka digaaga iyo xayawaanka sanadlaha ah ee Dymiankovye subfamily. Waxay ka heshay farxad balaadhan oo ay ugu mahad celinayaan ubaxyada koraya qaabka wadnaha. Sababtoo ah qaabka geedka, waxaa loo yaqaan "ubaxa wadnaha jaban". Nooca aan caadiga ahayn wuxuu jiidayaa bannaanka, qaar badan ayaana la yaabay sida loo koro xarun gurigooda.